Poco M3 Pro, Redmi Rịba ama 10S na Redmi Rịba ama 10 Pro na ahịa a na - apụghị ịgbagha agbagha | Gam akporosis
Onyeka Onwenu | | Mobiles, Xiaomi
Ngwaọrụ mkpanaka na smartwatches na-ebuwanye ibu na ahịa, ịbụ abụọ n'ime ngwaahịa ndị nwere nnukwu ọchịchọ dị ugbu a. N'ime ha ụfọdụ ụdị na-enwupụta n'ọkụ nke aka ha, dị ka Poco M3 Pro 5G, Redmi Rịba ama 10S, Redmi Rịba ama 10 Pro na Xiaomi Mi Band 6.
Portal AliExpress a ma ama nwere otutu onyinye, gụnyere ụdị ndị ahụ e kwuru na mbụ nwere nnukwu ego maka ndị na-achọ ugbu a ịgbanwe ekwentị ha ma ọ bụ ụdọ amamịghe. Enwere ike ịzụta ekwentị ọ bụla na nhazi dị iche nke RAM na nchekwa dị n'ime.
Otu n'ime ekwentị ndị pụrụ iche amaliteghị na Machị, ha niile nwere ngwaike dị ike ma mezue ihe ọ bụla achọrọ. Obere M3 Pro dị na AliExpress maka 196 euro ihe nlereanya na 6 GB nke ebe nchekwa na 128 GB nke nchekwa, gbasaa site n'inwe oghere n'akụkụ.
N'etiti atụmatụ ya Ihuenyo 6,5-inch Full HD + LCD na-enwu na ọnụego ume 90 Hz, Gorilla Glass 3 na DotDisplay. 6 GB Ram bụ nke ụdị LPDDR4x, ebe nchekwa ahụ bụ UFS 2.2, tinyere batrị 5.000 mAh na ụgwọ 18W ngwa ngwa.
Ejiri igwefoto anọ kwadoro ya, atọ dị azụ, mgbe otu n'ime ha na-aga n'ihu. Malite na azụ, Poco M3 Pro 5G na-abịa ịrịgo oghere 48-megapixel, nke abụọ bụ 2-megapixel nnukwu, ebe nke atọ bụ oghere omimi 2-megapixel. Ihu dị 8 megapixels.
Ọ na-abịa kwadebere ya na Dimensity 700 processor, Mali-G57 MC2 graphics chip, na mgbakwunye na inwe nnukwu njikọta, gụnyere 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC na ọ bụ Dual SIM. Sistemụ nrụọrụ bụ gam akporo 11 na interface MIUI 12, nkwalite niile na MIUI 12.5 na ụdị ọdịnihu.
1 Xiaomi Redmi Rịba ama 10S
2 Xiaomi Redmi Rịba ama 10 Pro
Xiaomi Redmi Rịba ama 10S
Ejiri Xiaomi gosi ya usoro ntinye nke 10 dị ka otu n'ime ndị na-akpali ntinye-larịị igwe n'ihi na nke ike nhazi. Ekwentị nwere nhazi 6/128 GB enwere ike zụrụ na AliExpress maka euro 189, ebe 8/128 GB na-aga euro 227.
Ihe nrịba ama nke Redmi bụ 10S na-akwado 6,43 inch nke Super AMOLED Full HD +, na-echebe site na ọkọ na bumps, sitere na ụdị Gorilla Glass a ma ama. The obubọk na-egbu maramara, ọ bụ otu n'ime ihe ndị pụtara ìhè, na mgbakwunye na ịbụ ihe ngebichi niile, a na-ahụ bezel na ala.
Na-etinye Helio G95 dị ka ihe nhazi, 6/8 GB nke ebe nchekwa RAM LPDDR4x, 64/128 GB nke nchekwa na nke ahụ ga-agbasawanye ekele na oghere MicroSD. Batrị nke ihe nlereanya a bụ 5.000 mAh, ha niile nwere ngwa ngwa ngwa ngwa nke 33W, nwere ike ịgba ụgwọ site na 0 ruo 100% naanị ihe karịrị 45 nkeji.
Igwefoto bụ isi nke Redmi Rịba ama 10S bụ megapixels 64, nke abụọ bụ 8 megapixel ultra wide angle lens, nke atọ bụ nnukwu megapixel 2 na nke anọ bụ 2 megapixel omimi. Enyo ihu bụ megapix 13. Usoro a bu Android 11 na MIUI 12.
Xiaomi Redmi Rịba ama 10 Pro
Redmi Rịba ama 10 Pro bụ n'ezie otu n'ime smartphones kachasị mma si emeputa, ịbụ a 4G nlereanya ma na-akpali mmasị àgwà-price ruru. Standardkpụrụ ọkọlọtọ dị ọnụ na 239,99 euro na AliExpress, ịbụ otu n'ime ahịa kachasị mma kemgbe mmalite ya.
Ekwentị na-agbakwunye nnukwu 6,67-inch AMOLED Full HD + ihuenyo nwere ọnụego ume ọhụrụ nke 120 Hz na ngalaba panel nke bụ 20: 9. Nchebe ọ na-echekwa bụ Gorilla Glass, zuru oke iji zọpụta ya na ncha ọ bụla ma ọ bụ ọkọ, yana obere ọkpọ na ndị ọzọ.
Ihe nlere Pro a kpebiri itinye Snapdragon 732 processor (4G), na mgbakwunye 6/8 GB nke Ram na nchekwa nke sitere na 64 ruo 128 GB. Batrị ahụ dị n’ime ya bụ 5.020 mAh na ụgwọ ngwa ngwa 33W, nke yiri ihe Redmi Note 10S nlereanya na-eme, igwe na-adọrọ mmasị.
Igwefoto nke ihe nlere a malitere site na ihe mmetụta 108 megapixel, nke abụọ bụ 8pipixel obosara, nke atọ bụ teepu megapixel 5 na nke anọ bụ 2 megapixel omimi. Ngwunye agbakwunyere bụ gam akporo 11 na MIUI 12. Njikọta ya na ya bụ 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, infrared, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Poco M3 Pro, Redmi Rịba ama 10S na Redmi Rịba ama 10 Pro na ahịa a na-apụghị ịgbagha agbagha